Guiyang Zhongshuge Isitolo Sezincwadi - Umagazini Design
Isitolo Sezincwadi Ngemigodi esezintabeni kanye namashalofu abukeka njenge-stalactite grotto, isitolo sezincwadi sazisa abafundi ezweni lomhume weKarst. Ngale ndlela, ithimba lokuklama liletha umuzwa wokubuka omnandi ngenkathi ngasikhathi sinye libonisa izici zendawo namasiko esixukwini esikhudlwana. IGuiyang Zhongshuge ibilokhu isici sendawo namasiko futhi ibonakala emadolobheni edolobheni laseGuiyang. Ngaphezu kwalokho, futhi ibopha igebe lesimo samasiko eGuiyang.
Igama lephrojekthi : Guiyang Zhongshuge, Igama labaklami : Li Xiang, Igama leklayenti : X+Living.
Isitolo Sezincwadi Li Xiang Guiyang Zhongshuge